Novonoin’ny Manampahefana Shinoa Ara-Pitsarana Noho ny Raharaha Vono Olona Ilay Maherifom-Bahoaka Nanohitra ny Fakàna An-keriny Ny Taniny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2016 6:01 GMT
Tao Shina, novonoina ara-pitsarana tamin'ny 15 novambra 2016 noho ny namonoana tamin'ny alalan'ny basim-borona an'i He Jianhua, filohan-tanàna tamin'ny febroary 2015 i Jia Jinglong.
Izao famonoana izao dia valifaty tamin'ny fandravana an-katerena ny tranon'i Jia vao avy nohavaozina hanomanany ny mariaziny tamin'ny taona 2013. Nandrava ny fanambadiany izao fandravana izao ary nandao azy mihitsy moa taty aoriana ny fofombadiny.
Voaheloka ilay lehilahy 30 taona ary nodidian'ny Fitsaram-Bahoaka Antenantenan'i Shijiazhuang hovonoina tamin'ny novambra, ary nankatoavin'ny Fitsaram-Bahoaka Ambony faritanin'i Hebei izany didy famonoana ho faty izany tamin'ny May 2016.
Na dia efa voaomana tsara aza ilay famonoana, dia nahazo ny fironan'ny vahoaka i Jia satria hitan'ny olona ho lasibatry ny fakana an-keriny ny tany amin'ny anaran'ny fampandrosoana izy. Ankoatra izany, nanaiky ny helony tany amin'ny polisy izy taorian'ny nisamborana azy. Tsy zava-tsy mahazatra ny fitsarana ny mampiato ny didy famonoana rehefa manaiky ny helony ilay olona. Eny fa na dia ny gazety mivoaka isan'andro China Daily miankina amin'ny fanjakana aza dia mankatoa ny toe-javatra mahazo an'i Jia tao amin'ny fanehoan-keviny rehefa nitatitra ny fampakaran'ny fianakavian'i Jia tany amin'ny Fitsaram-Bahoaka Tampony mba hampiatoana ny didy:
Araka ny hita amin'ny raharaha maro, dia niaina amin'ny maha-olon-tsotra mitady fiainana tsotra i Jia […] tahaka ny maro hafa izay ao anatin'ny fahakiviana tanteraka, te-hamaly faty ary mamely ny tenany sy ny hafa mba ho voamarika ny tsy rariny mahazo azy ireo, Tsy ho nanao tahaka izao i Jia raha nokarakaraina araka ny tokony ho izy ny fahavoazana mahazo azy.
Saingy nolavina ny fampakarana nataon'ny fianakaviana. Andro iray mialoha ny famonoana an'i Jia, tamin'ny 14 Novambra, manampahaizana ara-pitsarana sy mpisolovava am-polony no nanao antso misokatra ho an'ny Fitsaram-Bahoaka Tampony ho ezaka farany hanavotana ny ain'ilay lehilahy. Mandresy lahatra ny taratasy misokatra fa tokony hojeren'ny Fitsarana ho lasibatra i Jia.
Raraka fotsiny anefa ny antso farany. Nesorina tamin'i Jia ny ainy ny ampitso maraina. Karazana poezia mitondra ny lohateny hoe “Veloma Farany” ny teniny farany ho an'izao tontolo izao:
Poezia fanaovam-beloma farany nosoratan'i Jia tao am-ponja. Via Twitter
Nosarahan'ny didy famonoana ho faty androany. Tsy maintsy nifarana antenantenan-dalana ny nofy. Nifarana tsy misy ampitso ny zava-drehetra.
Na dia tsy manahy sy madio. Mangarahara toy ny vato kristaly ny fanodinan-dresaka. Voatroka ny tantara ao ambadika.
Tara-bolana mazava amin'ny ony mangarahara. Tsy mahita ny endrikao.
Volana manirery sy mangadihady. Alahelo hatsatra sy trotraka. Tsy misy andro sisa intsony. Mandry ao amin'ny Nirvana ny fitiavana fatratra sy ny fikirizana.
Mikitoantoana toa onja miloko ny fiainana. Miankina amin'ny fefy mijery ny rivotra mandalo amin'alahelo. Tsy mahita ny hanitry ny voninkazo sy ny ahitra. Ny feon'ny valala sy ny lolo no tsiaro tiana indrindra. Mahita ny endri-pitiavana rehetra.
Nanary ny zava-drehetra tamin-ditra. Jia ao Gaoyin [tanindrazan'i Jia]. Saingy tsy nomem-balisoa ny valifaty. Nandalo ny zava-drehetra. Maniry ny hahatongavan'ilay malalako. Avelao ny ranomasoko hiteny veloma mandrakizay anao.
Maro tamin'ny mpiserasera no nanontany hoe nahoana no nolavin'ny fitsarana ny fampiatoana ny famonoana ho faty. Deraina fatratra amin'ny fanabeazana komonista shinoa ny tantaran'ireo olon-tsotra mijoro miatrika ireo mpanango-tany ambanivohitra syandian-jiolahimboto, ary mifanaraka indrindra amin'izany fomba fitantarana izany ny tantaran'i Jia. Araka ny nasongadin'ny mpiserasera iray toy izao:
Tsy misy ny mahasamy hafa ny tantaran'i Jia Jinglong amin'i Chen Shen Wu Kuang [fiokoan'ny tantsaha nandritra ny Ampira Qin]. Ho an'ny lehilahy shinoa mpandala ny nentin-drazana, tsy maintsy mijoro izy hiaro ny tranony. Tsy mpamono olona izy ary tsy tokony didiana ho faty. Nandray ny anjara toerany hiaro ny fianakaviany fotsiny izy. Saingy nandrava ny tranon'ny vahoaka shinoa ny fiaramilina mpandroaka tany…
Maro ihany koa ireo nanondro ny fampiatoana ny famonoana ho faty an'i Gu Kailai, izay namono nahafaty ilay mpandraharaha britanika Neil Heywood. Efa saika voafafa avoka ny ankamaroan'ireo fifanakalozan-kevitra hita ao amin'ny sehatra media sosialy Weibo, saingy azo jerena ao amin'ny Twitter ny votoaty mitovitovy amin'izany tahaka ny:
Novonoin'i Gu Kailai ilay mpandraharaha britanika Neil Heywood ary dia nahazo fampiatoana ny famonoana azy ho faty izy. Niaro ny zony i Jia Jinglong ary namono ilay fetsifetsy ka dia nodidiana ho faty izy. Ny nolazaina moa fianakavian'i Zhao [ny sangany], ny farany indray tsy-Zhao namono ny alikan'i Zhao. Ny havam-badin'i Zhao, mazava loatra, miaro ny tombontsoan'ny fianakavian'i Zhao. Tsy misy ny rariny ho an'ny havam-badin'i Zhao, tsy efa mazava ve izany?
Ny hafa indray nandresy lahatra fa nesorin'ny maodelim-pampandrosoana ahitana fakana tany sy fandravana ankaterena mahery setra ny zon'olon-tsotra. Notsongaina sy niely tokoa ny fanehoan-kevitr'i Xin Ke, shinoa mpanoratra tamin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tsy hampiantona ny didy mihatra amin'i Jia:
Nahoana no maty i Jia Jinglong? Tsotra ny antony. Avelao holazaiko anao. Tsy dia mifandraika loatra amin'ny lalàna ary kely ihany no idirany amin'ny lafiny politika. Tokana ihany no antony: omena alalana ve sa tsia ny fandravana an-katerena manaraka. Raha tsy avela, dia tsy ilaina ny mamono azy. Tsy mila mahazo tsiny [amin'ny famonoana] ry zareo. Raha mila tohizana [ny fandravana an-katerena, dia mila azy maty, raha tsy izany dia tsy misy intsony ny hanao ilay raharaha. Rehefa azonao ny valin'ny politikan'ny fandravana ankaterena, dia azonao ny valiny momba ny ain'i Jia.
Mpanoratra shinoa avy amin'ny tanibe iray hafa, Shishusi, niresaka ny raharaha hikatra ambony kokoa ao amin'ny Weibo:
Novonoina araka ny didim-pitsarana i Jia Jinglong, izay nampiasa basim-borona [bala miparitaka] hamonoana ny filohan'ny tanànakely. Ny mahatonga ity raharaha ity hifantohan'ny vahoaka dia mifandraika amin'ny tsy fahafalian'ny vahoaka amin'ny fandravana an-katerena sy ireo fandaminana ny antoko eny ifotony. Ny zavamisy, misy olana lehibe kokoa mila vahana.[…] Mora kokoa ny mitifitra ho faty an'i Jia Jinglong. Saingy sarotra ny mamaha ny olan'ny fihetseham-pom-bahoaka [amin'ny fandravana an-katerena]. Ampio menaka, fihavaozan'i Shina, fampanajana ny lalàna sy ny fitoviana. Tsy tara loatra velively ny mihaino ny feon'ireo valalabemandry
Na dia miabo aza ny fanehoan-kevitr'i Shishusi, dia nesorina tao amin'ny Weibo. Taorian'ny atso nataon'ireo manampahaizana ara-pitsarana nivoaka tamin'ny 14 Novambra, dia nomarihan'ny Shinoa mpanao propagandim-panjakana ho fihantsiana ny fahefam-pitsarana izay hevitra rehetra mivoaka amin'ny raharaha Jia Jinglong’ ka dia nofafan'ny mpanampim-bava an-tserasera avokoa ny fifanakalozan-kevitra mifandraika amin'izany.